Atụmatụ maka Berlin - Germany - 10 nlegharị anya - 1aviagem.com
Atụmatụ, ajụjụ ọnụ, akụkọ ndị otu onye na-amanye oge mbụ kwuru
Gịnị kpatara aha a?
Kwadebe njem gị
North na Central America
Mepee wijetị ngwaọrụ
Atụmatụ na Berlin - Germany - 10 nlegharị anya
Gara aga post: Otu esi agbaze uwe n’enweghị iron
Nkwupụta ọzọ: ugwu mgbawa na ọrụ ebube na njem mbụ anyị na Chile
Edebere 7 March 2019 site Römulo Lucena
Kedu ihe anyị kwesịrị ịtụ anya na Berlin, isi obodo Germany? Atụmatụ ndị a bụ maka onye ọ bụla na-eme njem mbụ ha n'ebe ahụ.
Ọ bụrụ na otu ihe dị na Berlin nwere ebe ọ ga-eme nleta. Ọtụtụ n'ime ya nwere uru akụkọ ihe mere eme, site na mgbidi ahụ, nke a maara n'ụwa, Wall Wall; n'ụlọ nzukọ, na-agafe ọdụ ụgbọ oloko, ebe ncheta, ogige ntụrụndụ, square, ọnụ ụzọ ámá na ọbụna ọkụ ọkụ! Na nkenke, obodo ahụ na-eku ume n'akụkọ ihe mere eme, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe atụ nke ihe omume nke mbụ na nke abụọ ụwa agha. A gwakwara eziokwu, Berlin abiala ịgbanwe akụkọ ntolite nke ụmụ mmadụ n'ofe uwa ma nwee ọrụ maka mgbanwe nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke ọdịbendị na nke akụ na ụba, ruo mgbe anyị ruru mmepe dị ka anyị si mara ya taa.
Ya mere, nọdụ ebe ahụ ma anyị nwere aro maka ihe ịga leta na njem mbụ gị na Berlin.
Kedu ihe ị ga-eleta?
Aga m agba mbọ nkenke ma mee ndepụta 10 n'elu ihe ị ga-aga n'obodo ahụ.
1 - Wall Berlin
Echere m na nke a bụ ihe bụ isi, nke dị mkpa maka onye ọ bụla na-aga Berlin.
Mgbidi na 1965
Ndien ntak-a? Maka ihe niile na akụkọ ihe mere eme ọ na-ewetara ya. Mgbidi ahụ bụ ihe nnọchiteanya kasịnụ nke ọdịiche nke ụwa n'etiti okpukpere-ọchịchị na nke ọchịchị. Akụkọ ya na-egosi otú ụmụ mmadụ nwere ike isi mee ihe nzuzu, ihe ndị dị oke egwu na-enweghị nlele ihe ga-esi na ya pụta. Na ihe kpatara ndi mmadu ji choro ichoputa ihe ndi ochichi na-acho ma obughi na o na-agbaso ihe enyere n'iwu.
Ọdịda nke mgbidi Berlin na 1989 na-egosi njikọta nke obodo ahụ, nke Germany, nchịkọtaghachi nke ndị ikwu na mmeri nke oge gbara ọchịchịrị, bi n'ụwa nile. Enwere m ike ikwu na ọ ga-abụ njedebe nke Apartheid na South Africa.
N'ime mgbidi nke Wall Wall, amụrụ m ndụ. Olileanya maka ọdịnihu.
2 - Achọpụta ebe a
Shaịlị na-edebe ihe
Ọ bụ ọrụ agha nke na-eche nche n'etiti West na East Berlin na oge mgbidi ahụ na obodo ahụ kewara. Maka amaokwu site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ nke CITY. Ana m eme ka obodo ahụ pụta ìhè n'ihi na anyị anaghị ekwu maka njedebe ókè n'etiti obodo, mana n'ime obodo nke otu mba ahụ. Nke a dị nnọọ njọ. Were ya na ibiliri otu ụbọchị ma ghara inwe ike ileta ndị ezinụlọ gị, ma ọ bụ ndị enyi gị, naanị n'ihi na ha nọ n'akụkụ nke ọzọ nke obodo ahụ?
Ọfọn, ọ bụla na-achị achị na-enweghị ya na na nke a ọ bụghị dị iche iche. N'ebe a na-akpọ Charlie, ị gafere site n'otu akụkụ nke Berlin gaa na nke ọzọ. Ma, ị ga-abụ onye so n'Òtù Ndị Agha Nile ma ọ bụ onye nnọchiteanya mba ọzọ. O doro anya na cross escorted.
N'oge a, ọ bụ otu n'ime ebe ndị nwere ọtụtụ ndị nlegharị anya. Onye obula choro iwere ihe osise nke ulo na ihe omuma a ma ama nke bu "I na esi na ndi America"! Ị na-ahapụ ụlọ ọrụ America.
3- Alexanderplatz na Ụlọ Nche TV
Ọ bụ nnukwu ogige Berlin. Na ya bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ oloko ukwu nke obodo ahụ. Nakwa ọtụtụ akara, ma e wezụga ịbụ ebe na nhọrọ nzụta.
A Ụlọ elu TV (Fernsehturm) nke dị na square a buru ibu, nwere mita 368 ma bụrụ nnukwu ụlọ na Berlin. Ọ bụ ụlọ elu mgbasaozi. Tụkwasị na nke a, ọ nwere ụlọ ahịa panoramic nke nwere elekere 360 si n'obodo ahụ. Ọ na-agagharị, n'ihi ya, i nwere ike ịhụ obodo ahụ na-enweghị isi na oche bilie! (Otu dum juputara banyere 30 nkeji).
Ụlọ elu TV na Alexanderplatz
Ma gịnị mere ụlọ elu ahụ ji mee ihe akụkọ?
Ụlọ elu TV kwesịrị ịbụ ụlọ nke kachasị ihe ọbụla ma na-anọchi anya mmeri nke socialism maka ịgba chaa chaa. Echiche ahụ bụ na oghere ụlọ elu TV dị ka Satvish satellite Sputnik (nke mbụ satellite nke ọma zigara ohere) ma kwesiri inwe acha uhie uhie, agba nke socialism. Otú ọ dị, onye na-ese ụkpụrụ ụlọ bụ Bruno Flierl kwuru na agba aja ahụ na-egosi na ya na satellite Sputnik dị na satellite, si otú ahụ na-anọchite anya nkà na ụzụ nke mba ndị na-elekọta mmadụ.
Ihe owuwu a bụ nke Hermann Henselmann na Jörg Streitparth, tinyere onyinye nke ndị isi ndị ọzọ dị ka Fritz Dieter, Günter Franke, Werner Ahrendt Walter Herzog na Heinz Aust.
4 - Ọnụ Ụzọ Ámá Brandenburg
N'elu ọnụ ụzọ ámá Brandenburg
Ọnụ Ụzọ Ámá Ọnụ Ụzọ Brandenburg bụ otu n'ime ọnụ ụzọ ámá nke nyere ohere na Berlin mgbe obodo ahụ ka dị obere ma gbaa mgbidi gburugburu ya. Taa bụ akwụkwọ ozi kachasị ama na Berlin. Ọnụ Ụzọ Brandenburg dị na Pariser Platz nke dị n'etiti etiti.
5- Park Park ma ọ bụ Tiergarten
Nke a ga - abụ "Egwuregwu Park" na New York ma ọ bụ "Park Park na Brasilia". O kwesiri ileta ndi choro iwepu ugbua ma kpoo ikuku ohuru n'etiti otutu ulo akwukwo ihe mere na obodo Berlin.
6 - Ngwongwo Mmiri - "Ngwuputa Mmiri"
Ọ bụ mmadụ ole na ole maara ma e nwere ọdụ ụgbọ ala phantom dị na Berlin. Enweghi ugboala uzo ala, abughi ubochi ma obu nbupu. Ma ee e, o nweghi obi ojoo. (Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị na m maara nke). Ma iji ghara ịhapụ iwu ọ bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọ bụ ọdụ ụgbọ oloko echekwara kemgbe Agha Ụwa nke Abụọ na ebe ọ bụ na e wuru Wall Wall. Site na ọwara ụgbọ mmiri ndị si na East Berlin gaa West Berlin. Echiche ahụ dị mfe, ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịgafe, n'ihi na e nwere mgbidi nchedo nkewa obodo ahụ. Mgbe ahụ, anyị na-aga n'okpuru, na-eji ọdụ ụgbọ oloko eme ihe.
Ndien nso iketịbe?
Gọọmentị chọpụtara na ndị mmadụ mere njem a (nke mebiri iwu n'oge ahụ) ma kpebie igbochi ya. Nsogbu bụ na ha gbochie njedebe abụọ n'otu oge ma gharadị ịchọ ịmata onye nọ n'ebe ahụ. O doro anya na ọtụtụ ndị nwụrụ n'ebe ahụ iji gbalịa ịga n'akụkụ nke ọzọ. Ọ bụ ya mere eji akpọ ya ọdụ ojii. N'ihi ndị e liri n'ebe ahụ. E chebere ya ka e debe ya na akụkọ ọjọọ nke ngalaba nke Berlin, ọ ga-abụ ihe ncheta ala. N'agbanyeghị mweghachi ahụ ka ọ dị na atụmatụ nke 1960, ọ ga-ekwe omume ịhụ ekwentị na ụgbọ oloko nke oge dịka ha nọ mgbe ọ nọpụrụ iche. Ya mere, ụgbọ oloko ụgbọ oloko agafe.
7- Hitler Bunker ma ọ bụ Führerbunker
Ebe ọzọ mara nke ọma ga-abụ Führerbunker.
Ọ bụ ebe Hitler zukọtara elu nke ọchịchị ya ma zube atụmatụ agha ya.
Nke a na bonka bụ 5 mita dị ala site na ala ma nwee ihe karịrị 4 mita nke ihe iji chịkọta ya. Echiche ahụ bụ ka a chebe ya pụọ ​​na iku ọkụ. (Anyị na-ekwu okwu banyere otu akụkọ nke ncheta nke abụọ?).
Ọ bụ ebe a hụrụ ozu ahụ Hitler nwụrụ anwụ. A na - ekwu na ọ gwara ndị agha ya ka ha gbuo ya, n'ihi na, ebe ọ hụrụ na ọchịchị ya ga - abịa ná njedebe n'ihi njikọ ndị agha ndị agha ahụ wakporo na ọnọdụ ya, ọ maara na a ga - egbu ya. Mgbe ahụ, n'ọrịa ya na-arịa ọrịa, ọ ga-aka mma ka onye Nazi gbuo ya karịa n'aka onye iro. Ebe ọ bụ na ọ dịghị onye nwere obi ike a, o mechara gbuo onwe ya ka ọ ghara inyefe ndị agha ahụ.
N'ibu ihe di omimi nke ebe a na ibu nke o na-eweta, nke ohuru Germany kpebiri na o di mma igbatuo ala ahu ma wuo ya. Nke a bụ ụzọ isi mee ka ihe ọhụrụ pụta ma nye ohere nye ọha mmadụ. E nwere ike ịhụ Bunker na fim "Fall, Hour Hours of Hitler"
Ebe nke Hitler bonka
8- Ụlọikpe Germany ma ọ bụ Reichstag
Ọchịchị Reichstag (ọ bụghị ya nwere yahtag ok ?! LOL 😂😂) kwesịrị nleta maka ịbụ ebe nile akụkọ ntolite nke ọkụ na madụ nke Hitler malitere. E nwere ọkụ na dome ahụ, ma eleghị anya, onye gọọmentị gọọmenti, bụ onye e jidere n'oge ahụ. Adolf Hitler, onye bụ onye isi obodo Germany n'oge ahụ, jiri ọnọdụ ahụ mee ihe ma gwa ya ka onyeisi oche ahụ (bụ onye kwetara) iji mee iwu Reichstag. Iwu a wepụrụ ọtụtụ n'ime ikike ụmụ mmadụ. Na mmalite nke okwu Nazi. Ọ bụ n'ebe ahụ ka e nyere ndị nzuzu ndị ọzọ, dị ka iwu Wall Wall. Echefula ileta ya.
9 - Ncheta Oké Mgbukpọ
Ememe ncheta a, nke ji 2.711 rụọ ihe dị iche iche dị iche iche ma nwee ụlọ na-enweghị ntụpọ na-achọ ime ka onye nleta nwee mmetụta nke nsogbu, egwu na ike ije ije. Nke bụ ihe mere ndị Juu n'oge ọchịchị Hitler. E nwere ọnụ ụlọ nke na-eweta ihe ọmụma banyere ihe ncheta ahụ na ndị Juu.
Ebe nchekwa nke ncheta
Ọgwụgwụ nke ncheta holoscausto
10- Lelee ihe ịrịba ama okporo ụzọ (Ampelmann)
Dị ka m kwuru ná mmalite nke post a, ihe nile dị na Berlin bụ akụkọ ihe mere eme! Ọbụna ìhè na-ebu ntakịrị ya.
Ampelmann, ma ọ bụ German, Ampelmännchen - bụ ihe nnọchianya kachasị mma ị ga-ahụ na Berlin. Ọ bụ obere nwa bebi dị iche na ọkụ ọkụ.
Gịnị mere Ampelmann ji dị mkpa?
Ọ na-egosi East Berlin, akara a nwere ike inye gị echiche nke ebe ị nọ n'obodo ahụ. N'ebe ọdịda anyanwụ, ọkụ ọkụ na-ere ọkụ gbanwere dị ka iwu kachasị mma.
Tụkwasị na nke ahụ, onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ, onye edemede, onye na-emepụta ihe a nile na-emepụta ya na ọnụ ọgụgụ otu nwoke. Nwunye ya gbasoro mmepe nke ihe nnọchianya ahụ ma nyere ya nkwado dị ukwuu n'oge e kere ihe ihe taa ga-abụ ihe nnọchianya kachasị elu nke ezinụlọ.
Karl Peglau kere Ampelmann ka ọ bụrụ "na-arụ ọrụ na arụ ọrụ". A na-eji dolls abụọ (site na nkwụsị na njem ije ije) iji meziwanye anya ndị mmadụ na-ahụghị ọhụụ. Okpu ọzọ na-edekọ ụdị oge ahụ ka na-eme ka mma nghọta nke mmegharị ahụ. Dị ka Karl Peglau si kwuo: "nnukwu ebe ahụ, ka ìhè ahụ dị, nke ka mma".
Tụkwasị na nke ahụ, mkpịsị ọnụ "nkwụsị" ahụ bụ, mkparịta ụka mkparịta ụka kachasị mma bụ maka ndị mmadụ na-ele anya okporo ụzọ.
Enweghi akara ngosi okporo ụzọ ndị ọzọ na ụwa ka a na-eji nlezianya emepụta n'okpuru akụkụ nkà na ụzụ dị ka East Ampelmännchen. Ndụ nke onye okike ya na njikọ nke Berlin.
N'ebe a, anyị gwụchara atụmatụ njem anyị maka Berlin. Ị nwere otu ọnụ? Ebe ọ bụla ọzọ kwesịrị ịdị na ndepụta a?
Hapụ ya n'ebe ahụ. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ, echefula na ị ga-enwe obi ụtọ na ịkekọrịta.
Ruo mgbe ọzọ 😎!
Olee otú Alemanha Berlim Olee otú njem mbụ
Pịa ịkọrọ na Twitter (emepe na ọhụrụ window)
Pịa ịkọrọ na Facebook (emepe na ọhụrụ window)
Pịa ịkọrọ na WhatsApp (emepe na ọhụrụ window)
Pịa ịkọrọ na Pinterest (emepe na ọhụrụ window)
Pịa ịkọrọ na Reddit (emepe na ọhụrụ window)
Pịa ịkọrọ na LinkedIn (emepe na ọhụrụ window)
Pịa ịkọrọ na n'akpa uwe (Ga-na ọhụrụ window)
Pịa ịkọrọ na Telegram (emepe na ọhụrụ window)
Pịa ịkọrọ na Tumblr (emepe na ọhụrụ window)
Pịa e-mail ka a na enyi (emepe na ọhụrụ window)
Pịa ịkọrọ na Skype (mepee na windo ọhụrụ)
enwe Loading ...
Römulo Lucena	Lelee Niile →
Kekọrịta ahụmịhe njem, webata ọdịnala na akụkọ ihe mere eme ka ị nwee ike mee ka njem gị bụrụ nke udo.
Anyị na-eme njem mbụ ma gị soro anyị.
Hapụ okwu gị ebe a	Cancelar resposta
Debanye aha na blog site na email
Tinye adreesị email gị iji denye aha na blog a ma nata ọkwa nke akwụkwọ ọhụrụ site na email.
Jikọọ 136 ọzọ ndị debanyere aha
Okwu: Onye njem Atụmatụ Okwu Okwu
Ihe kpuchie ngwa agha
Gaa n'ihu Facebook
Gaa n'ihu Google
Vingga n’ihu inyefe ntakịrị ihe a n’aka onye chọrọ #travel ma gafere # COVID-19. #borala nweta the 1aviagem.com (njikọ na bio) #urhur 🇺🇾 #montevideo #pontosturisticos #rambla #mujica #1aviagem #bolivar #artigas
#kitty #domingou #caixadepapelao Ihe dị mma maka ịdị mfe bụ na ọ na-a withụrị ọ withụ ntakịrị. A #box nwere ike ịbụ nnukwu ebe nzuzo. Ọ dị ka ihe egwuregwu ụmụaka ọhụrụ. Akwati #Cat + kaadiboodu sochiri #success. Withụrịa ọ withụ na ntakịrị ma ị nwere ike iji ọtụtụ ndị rejoiceụrịa ọ rejoiceụ. #kittens #playing #around #enjoyyourweekend #sunday
Ka m chọọ ma nyere m aka ịma ụwa (ọ naghị efu ihe ọ bụla)
Agara m mba 34 United Nations (17.61%) na ngụkọta nke 193.
email ka ị ghara ida posts ọhụrụ.
Tinye adreesị email gị iji soro blog a
Lelee email gị ma kwenye
Send ka oendereço email Aha gị Your e-mail kagbuo
Post e zigara - elele gị adreesị email!
Email ego okpu, na-agbalị ọzọ
Ndo, gị blog ike ịkekọrịta posts site email.
%d blọgụ dị ka nke a: